SINODRILLS Is-Qodida Qaybaha barroosinka waxaa loo isticmaalaa sidii wax lagu bixiyo allabariga qodista, inta badan waxaa jira carbide Tungsten iyo bir adag oo laba nooc ah, iyada oo loo marayo farsameynta ama farsamada wax soo saarka tuurista.
Blast Furnace Open Drill tuuboyinka Qarax Furnace tuuboyinka Drill tuuboyinka R38 Qarax Foornada Drill tuuboyinka
Ballaca Dibadda: R32, R38, R39 iwm
Dhumucda darbiga: 38 * 12, 32 * 10, 30 * 10 iwm.
Waxyaabaha: 10 #, 20 #, 30 #, 45 #, 20G, 40Cr, 20Gr, 16mn-45mn, 27SiMn, Cr5Mo, 12CrMo (T12), 12Cr1MoV, 12Cr1MoVG, 10CrMo910, 15CrMo, 35CrMo, 40CrMo,
Iibinta Hot Hot Tayada Sare ee Daloolin Rod Rock Drill Qalabka for Foornada Qarax
Nooca: JD32-1832R / 25H 、 JD38-1832R, JD38-2438R, JD38-3038R, JD38-3638R, JD38-3838R, JD38-4338R iwm
Supanchor R25 R38 R51 is qodida barroosinka barroosinka SDA ee Dhismaha Dhulka
Nidaamka Barroosinka Is-Qodida Is-qodku wuxuu ka kooban yahay barroosinka barroosinka oo duuduuban oo maran oo leh qoddo cayiman oo fuliya qodista, barroosinka iyo ku-shubista hal qalliin. Nidaamka barroosinka qodista isdifaaca waxaa inta badan loo adeegsadaa xasilinta jiirada, tunnelka taakuleyn horudhac ah, aasaasyo leh iskudhaf yar yar iwm shaqooyin, kaas oo si ballaaran loogu adeegsado macdanta, tunnel, tareenka, metro dhismaha iwm.
R38 isku xidhka lammaanaha R38 ee loogu talagalay is-qodista isku-xidhka dhagaxa weyn
Barroosinka isku-xidhka ama loo yaqaan 'anchor rodlingling,' oo loo isticmaalo in lagu dheereeyo xarigga barroosinka sida dhererka loo baahan yahay.
Tuubo bir ah oo aan xuduud lahayn (A106, A53, API 5L, ST37, ST52, S275, S355)
ASTM A312 kulul oo duuban qiimo jaban biibiile bir ah oo aan xuduud lahayn
Waxaan nahay soo saaraha xirfadle ee biibiile steel. Bixinta tayo iyo adeeg gaar ah oo leh qiimeyn tartan ahC. S. tuubooyin aan xuduud lahayn, dhuumaha xarkaha ah ee biraha isku xira.